Homeबिबिधपैसा कसरी कमाउने ? जुकरबर्ग र बिल गेट्सका ‘टिप्स’
एजेन्सी । पैसा कमाउन तपाईं हामी कसलाई मन छैन र ? अझ टन्न पैसा कमाएर ऐशआरामको जीन्दगी जीउने कल्पना हर कोहीले हर समय गरि नै रहेको हुन्छ । तपाईं पनि गर्नु हुन्छ नै । तर कसरी पैसा कमाउने भन्नेमा तपाईं रुमल्ली रहनु भएको छ भने संसारकै सबैभन्दा धनाड्यहरु बिल गेट्स र फेसबुकका सस्थापक मार्क जुकरबर्गले दिएको यो सामान्य टिप्स काम लाग्न सक्छ ।
भिडियो गेम खेलेर एक वर्षमा २ लाख डलर